Thwebula AOL Desktop 9.8.2 – Vessoft
WindowsInthanethiAbanye be-intanethiAOL Desktop
Isistimu esebenzayo: Windows
Isigaba: Abanye be-intanethi
Ikhasi elisemthethweni: AOL Desktop
AOL Desktop – isofthiwe nge eziningi services eyakhelwe-in. Isofthiwe iqukethe yamathuluzi i lula ukufinyelela sites web ahlukahlukene kanye nezinsiza ngokusebenzisa isiphequluli esakhelwe ngaphakathi. AOL Desktop ikuvumela ukuphatha imeyili, ukuxhumana in zokuxhumana, upheqa izindaba, ulalele umsakazo online kanyekanye, njll Isofthiwe isekela ukusebenza okugcwele esemazweni isiphequluli ne oludidiyelwe thwebula umphathi, umsebenzi okunamathebhu web ephephile surfing. AOL Desktop has amathuluzi amaningana ukuze wenze software ukuze ngabanye okuthandwayo komsebenzisi kanye nezidingo.
Amasevisi amaningi esakhelwe ngaphakathi
The fast isiphequluli sewebhu
A anhlobonhlobo izilungiselelo
Esakhelwe media player
Thwebula AOL Desktop
Chofoza inkinobho eluhlaza ukuze uqale ukulanda
Ukulanda kuqalile, hlola iwindi lakho lokulanda isiphequluli. Uma kunezinkinga ezithile, chofoza inkinobho eyodwa ngaphezulu, sisebenzisa izindlela ezahlukene zokulanda.
Amazwana ku AOL Desktop
AOL Desktop software ehlobene
Isofthiwe ukugijima futhi aphathe akhawunti amaningi Skype on computer eyodwa kuphela. Isofthiwe kwenza kalula ukushintsha phakathi akhawunti nasekuxhumaneni in izingxoxo eziningana ngesikhathi esisodwa.
I-Ad Guard – isofthiwe yokuqinisekisa ukuhlala okuphephile ku-inthanethi. Isoftware ivimba amamojula wokukhangisa neziza eziyingozi.
I-Clownfish ye-Skype – isoftware yokuhumusha imiyalezo engenayo naphumayo ku-Skype. Isoftware isekela izinsizakalo ezidumile zokuhumusha ngenombolo enkulu yezilimi.
Isiphequluli ayethandwa Apple Inc. Isofthiwe ine technologies ehola netimphawu for operation lula in the internet.
I-Datacol – ithuluzi elinamandla lokushintsha usesho, ukucubungula kanye nokuqapha inani elikhulu lemininingwane evela ku-inthanethi. Isoftware ikuvumela ukuthi uthumele imininingwane oyitholile kumafomethi ahlukahlukene.
Isofthiwe ukubiza abantu ucingo nganoma iyiphi ingxenye yale planethi. It isekela ubuchwepheshe esikhethekile a izinga ukulahlekelwa sakugcina zokuxhumana ngezwi.
Bona isofthiwe engaphezulu
I-HD Video Converter Factory – okulula ukuyisebenzisa ukuguqula amafayela wevidiyo abe amafomethi asekelwa iningi lamadivayisi aphathekayo neziduduzi.
CCleaner – isoftware eyaziwayo yokuhlanza nokwandisa uhlelo. Isoftware ikuvumela ukuthi ukhiphe idatha yokubhalisa futhi uhlanze umlando womsebenzi we-inthanethi.
Ithuluzi nokwandisa bese uhlanza uhlelo kusukela kumafayela ezingadingekile. Isofthiwe ikuvumela ukususa amafayela esikhashana futhi baqhube defragmentation of hard disk yakho.